कैलाली घटनामा विवककी दिदीले दिइन् बयान, ‘यो चाँदीको बालाका लागि मात्रै भाईलाई धकेलेकी हैन’ …? - Thulo khabar
कैलाली घटनामा विवककी दिदीले दिइन् बयान, ‘यो चाँदीको बालाका लागि मात्रै भाईलाई धकेलेकी हैन’ …?
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ मुनुवारोडका साढे ३ वर्षका बालक विवेक मृ त फेला परे । उनको घटनामा दिदी नाता पर्ने १५ वर्षकी किशोरी र उनको साथीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नाताले दिदी पर्नेले प्रहरी समक्ष वयान दिएकी छन् । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार उनले दिएको वयान यस्तो छ ।
बिहान ११ बजेतिर सकुन्तला र विवेक घर पछाडीको बाटो हुँदै निस्के। उनीहरुले घरबाट झण्डै डेढ सय मिटरको दूरीमा रहेको जामनको रुखबाट जामन टिपेर खाए। त्यसपछि उनीहरु दुवैजना जमरा कुलो तर्फ अघि बढे। बाटो सकिएपछि एउटा मोड आउछ। मोड नजिकै बच्चाहरुको खेल्ने ठाउँ छ। त्यहाँ सकुन्तलाले विवेकलाई पिङ खेलाईन। स्थानीय एक महिलाले त्यो दृश्य देखेकी थिईन्।
त्यसपछि सकुन्तला र विवेक जमरा कुलोको छेउमा पुगे। प्रहरीसँगको बयानका क्रममा सकुन्तलाले भनिन्, ‘खुट्टाको चाँदीको बाला झिकेर बाबुलाई पानीमा धे के ले।’ उनले खुट्टामा रहेको चाँदीको बाला झिक्नुको उद्देश्य घटनालाई अन्यत्र मो ड् न रहेको प्रहरीलाई बताएकी छन्। ‘सबैलाई बालाका लागि घटना भएको भन्ने लाग्ला भनेर नै मैले त्यसो गरेकी हुँ’ उनले प्रहरीसँग भनेकी छन्,‘मेरो उद्देश्य बाला मात्रै हैन।’
विवेकका ठूलोबुबा हेमन्त घटनाका पछाडी कुनै न कुनै रहस्य लुकेको बताउँछन्। उनी सकुन्तलालाई अरु कसैले यस्तो गर्न भनेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘यो चाँदीको बालाका लागि मात्रै गरिएको घटना हैन’ उनले भने–‘घटनाका पछि कुनै रहस्य लुकेको छ।’
प्रहरी यही रहस्यको खोजीमा छ। उसले सकुन्तला र उनकी एक १४ वर्षकी साथीलाई पक्राउ गरेको छ। ती साथीलाई सकुन्तलाले विवेकको खुट्टाबाट झिकेको चाँदीको बाला राख्न दिएकी थिईन। प्रहरीले उनकी साथीबाट चाँदीको बाला बरामद गरेको छ।